विश्वकप फुटबलः आज पनि दुई खेल, कुन-कुन टिमबीच हुँदैछ भिडन्त ? – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप फुटबलः आज पनि दुई खेल, कुन-कुन टिमबीच हुँदैछ भिडन्त ?
मस्को । रसियामा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज (आइतबार) पनि नकआउट चरणका दुई महत्वपूर्ण खेल हुँदैछन् । क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि आयोजक रुसले स्पेन तथा क्रोएसियाले डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
आइतबारको पहिलो खेलमा बेलुका पौने ८ बजे मस्कोमा आयोजक रुस र स्पेनबिचको खेल हुनेछ । स्पेन समूह बी को विजेता तथा रुस समूह ए को उपविजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा आएका हुन् । पहिलो खेलमा साउदी अरेबियालाई ५-० तथा दोस्रो खेलमा इजिप्टलाई ३-१ ले हराएको रुस तेस्रो खेलमा उरुग्वेसँग ३-० ले पराजित भएको थियो ।
यस्तै पहिलो खेलमा पोर्चुगलसँग ३-३ को बराबरी गरेको स्पेनले दोस्रो खेलमा इरानलाई १-० ले हरायो । उसले तेस्रो खेलमा मोरक्कोसँग २-२ को बराबरी गरेको थियो । प्रतियोगिता सुरु हुनुअघिसम्म कमजोर मानिएको रुसले घरेलु मैदानको आत्मबल लिएको जस्तो देखिएको छ ।
यसले गर्दा आइबारको खेल स्पेनका लागि सजिलो नहुने देखिन्छ । यस्तै आइतबार हुने अर्को खेलमा राति पौने १२ बजे क्रोएसिया र डेनमार्कले निज्हनी नोभ्गोरोडमा हुनेछ । क्रोएसिया समूह डी को विजेता तथा डेनमार्क समूह सी को उपविजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा आएका हुन् ।
पहिलो खेलमा पेरुलाई १-० ले हराएको डेनमार्कले दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियासँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो । यस्तै उसले तेस्रो खेलमा फ्रान्ससँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो । क्रोएसियाले भने पहिलो खेलमा नाइजेरियालाई २-० तथा दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनलाई ३-० ले हराएको थियो । उसले तेस्रो खेलमा आइसल्याण्डमाथि २-१ को जित निकालेको थियो । यसअघि शनिबार राति भएका खेलमा जित निकाल्दै उरुग्वे र फ्रान्सले अन्तिम ८ मा स्थान बनाएका छन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: Croatia vs Denmark, Fifa world cup 2018, Spen vs Russia